बादलमा भगवान शिव “– देखेको ३ सेकेन्डमा ‘ॐ’ लेखि क’मेन्ट गरे भा’ग्य चम्किनेछ ! – Sandesh Munch
Prevशिशु प्रकरण : भाग्य न्यौपानेले माफी माग्दै लेखे यस्तो .. ( पुरा पढ्नुहोस्)
Nextयी हुन चाँडै धनि बन्ने र भाग्य बदलिने संकेतहरु
असत्य भन्दा सत्य नै किन बलवान छ ? सत्य सम्बन्धि ११ प्रेरणादायी भनाईहरु
भोलि शनिबार यो १ चिज दान गरे सम्पुर्ण पाप नाश हुन्छ ।
पापको बाउ को ? थाह पाई राखौ